(Sawirro) Puntland oo qadasho sharaf u sameysay nin sheegtay madaxweynaha Bakool Sare – Gedo Times
(Sawirro) Puntland oo qadasho sharaf u sameysay nin sheegtay madaxweynaha Bakool Sare
Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta 24-April-2016 waxa uu qado sharaf u sameeyey Madaxweynaha maamul goboleedka Bakool Sare Axmed Maxamed Mashruuc iyo wafti ballaadhan oo uu hoggaaminayey.
Ujeedka socdaalka Madaxweynaha Bakool Sare iyo waftigiisa ayaa salka ku haya marti-qaad rasmi ah ay ka heleen Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isla markaana ay doonayaan muddada ya ku sugan yihiin Puntland in ay ka faa’iidaystaan waayo –aragnimada gaamurtey ee dawladda Puntland ee dhinacyada dhismaha hay’adaha dawladda iyo sarraynta sharciga ee ka jirta Puntland.
Madaxweynaha Maamulka Bakool Sare ayaa kusimaha Madaxweynaha Puntland uga mahadcliyey sida qiimaha leh ee ay usoo dhoweeyeen iyo sidoo kale taageeradii ay dawladda Puntland hore ugu fidisay maamulka Bakool Sare xilligii ay u baahnaayeen garab istaagga ee la yagleelay.
Ugu dambayntii Madaxweyne Axmed Maxamed Mashruuc ayaa sheegay in maamulka Bakool Sare uu markii hore ka tirsaan maamulka kumeel-gaarka ah ee Koonfur-Galbeed isla markaana ay aayohooda ka tashadeen markii ay maamulkaasi kala kulmeen caddaalad darro iyo gabbood fallo ka dhan ah xuquuqul aadanaha.
Kusimaha Madaxweynaha Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan Madaxweynaha Bakool Sare iyo waftigiisaba isla markaana ay dawladda Puntland diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay tahay hooyada Federaalka Soomaaliya.
Dhageyso: Khaatuma oo diiday in Puntland ay soo xusho baarlamaanka Sool iyo Sanaag